स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघ (फेकन) को १०औं साधारणसभाबाट अध्यक्षमा बासुदेव नेपाल निर्वाचित भए। शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्दै व्यवसायीको हकहितमा लाग्ने प्रण नवनिर्वाचित अध्यक्ष नेपालले गरेका छन्। निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेका फेकनका अन्य सहकर्मीलाई मिलाएर लैजाने र संस्थालाई संशक्त बनाउने सन्दर्भमा अध्यक्ष नेपालको आगामी रणनीतिका सन्दर्भमा गरिएको संवादः
स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघ नेपाल (फेकन) को १०औं साधारणसभाबाट अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभयो। यससँगै तपाईले प्रतिस्पर्धा गरेका संस्थाका सहयात्रीहरूलाई कसरी समेटेर फेकनलाई अघि बढाउनुहुन्छ?
–लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेको नै चुनाव हो। हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने मान्छेहरू चुनावमा जान्छौं। स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्छौं। स्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाट आउने नजिता स्वीकार गर्छौं। फेकन अगाडि बढ्दैछ। नयाँ उचाइमा पुग्दैछ। यस्तो समयमा हामीले निर्वाचनमा हारेका साथीलाई पनि समेटेर लाने पक्षमा प्रतिवद्ध छौं। उहाँहरूलाई पनि अहम् भूमिका दिएर उहाँहरूको राय, सुझाव, अनुभवलाई समेटेर फेकनलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौं। फेकनलाई सुदृढ र सशक्त बनाउन धेरै चुनौती छन्। हामी सबैको साझा प्रयासबाट मात्रै यो सम्भव छ। निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेका सबै साथीहरूलाई एकताबद्ध बनाएर अगाडि बढ्छु।
अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि फेकनलाई अघि बढाउनका लागि पहिलो चरणका योजनाहरू के–के छ?
–पहिलो चरणमा प्राविधिक संरचनाका धेरै कुराहरू छुटेका छन्। त्यसलाई अगाडि बढाउने सोच छ। मेरो पहिलो काम नै प्राविधिक संरचनाका नीति नियमका कुराहरूलाई अघि बढाउने हुन्छ। त्यसपछि विस्तारै अन्य एजेण्डा र योजनाहरूलाई अगाडि बढाउने सोच छ।
फेकनको संगठन प्रदेशमा विस्तार गर्ने सन्दर्भमा तपाईको तयारी के छ?
–गण्डकी प्रदेशमा फेकन विस्तार भइसकेको छ। अन्य प्रदेशमा लैजानका लागि प्रादेशिक संरचनाका धेरै कुराहरू मिलाउनुपर्ने छन्। नीति नियमहरू बनाउनु पर्ने छ। मुख्य रुपमा हामीले अहिले यसमा नै काम गर्ने तयारी गरेका छौं।
कोरोना महामारीका कारण धेरै व्यवसायीहरू संकटग्रस्त छन्। व्यवसायीहरूको पुनरोत्थान र फेकन सदस्यहरूलाई संकटबाट उठाउन फेकनले कस्तो रणनीति लिन्छ?
–राज्यले हामीलाई अति प्रभावित क्षेत्रमा राखेको छ। त्यसमा हामी साना व्यवसायीहरू पनि छौं। साना व्यवसायीहरूका लागि राज्यले अति प्रभावित क्षेत्रका रुपमा राखेर सहुलियत कर्जा प्रवाह गर्दा राज्यले भनेका नीति नियम हामीले मिट गर्न सक्दैनौं। सहुलियत कर्जाका लागि साना व्यवसायी जसले राज्यका नीति नियमहरू र क्राइटेरियालाई पूर्ति गर्न सक्दैनन्, तिनीहरूलाई राज्यले स्वरोजगारका लागि भनेर शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर सहुलियत ऋण दिने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैगरी, हामी साना व्यवसायीलाई पनि शैक्षिक प्रमाणपत्र अथवा हाम्रो लाइसेन्स अथवा हाम्रो दर्ता भएका कागजपत्रहरू राखेर सहुलियत ऋण दिनका लागि पहल गर्ने छौं।
आफ्ना छोरोछोरीलाई उच्च शिक्षाका लागि विदेश पठाउन चाहने अभिभावकहरूलाई संगठनको नेतृत्वकर्ता र शैक्षिक परामर्श क्षेत्रको अग्रजको हिसाबले के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ?
–हामीले विद्यार्थीलाई करियर काउसिन्लिङ गर्दै करियर बिल्ड अपका लागि र उच्च शिक्षा हासिल गरुन् भन्ने उद्देश्यले विदेश पठाउँछौं। त्यसका लागि अभिभावकहरूले पनि आफ्ना छोरोछोरीले कुन देशमा पढ्न चाहन्छन्। उनीहरूले त्यो विषय पढ्न सक्छन् कि सक्दैनन्, भोलि त्यहाँ पढेर भविष्य उज्ज्वल हुन्छ कि हुँदैन भनेर बुझ्नुपर्छ। अभिभावकले यी कुराहरूको विचार गरी उचित सल्लाह दिनुपर्छ। हामी पनि उनीहरूलाई कुनै पनि देशको अवस्था, त्यहाँको शैक्षिक वातावरण, उनीहरूले पढ्न चाहेको विषय, त्यसको स्कोप आदि विषयमा परामर्श दिन्छौं। त्यसकारण विद्यार्थी तथा अभिभावकहरूले व्यवसायी तथा परामर्शदाताहरूको सल्लाहलाई ध्यानमा राखिअघि बढ्दा उचित हुन्छ।
#फेकन #स्वतन्त्र_शैक्षिक_परामर्श_संघ #बासुदेव_नेपाल